Zimbabwe businesses closed, streets deserted on day of protests – The 1873 TV
July 31, 2020 newsdesk	5 Comments july 31, MDC protests, News, Politics, wide
HARARE – Businesses were shut and streets deserted around Zimbabwe on Friday as security forces increased patrols to stop anti-government protests called by activists over corruption and economic hardship.
Police arrested opposition MDC Alliance spokesperson Fadzayi Mahere and novelist Tsitsi Dangarembga after they participated in small, localised protests in their neighbourhoods.
Lawyer Obey Shava was also detained with three MDC Alliance activists as he left a court in Harare, the Law Society of Zimbabwe said. Joana Mamombe, Cecilia Chimbiri and Nestai Marova were on their way to report at the Harare Central Police Station as part of their bail conditions after they were arrested in May, accused of staging their own abduction.
Nqobani Sithole, a lawyer, said dozens of people had been arrested by police, many picked up for allegedly loitering in western suburbs which were being patrolled by armed police.
Deserted … Businesses were shut and streets free of people and cars in Harare on Friday
Zimbabwe’s worst economic crisis in more than a decade is marked by inflation running above 700 percent, acute shortages of foreign currency and public hospitals crippled by strikes and a lack of medicine.
The president’s opponents say he has failed to unite a deeply divided nation after much hope when he took over from Robert Mugabe, who was removed in a coup in 2017.
Mnangagwa, like Mugabe before him, says the economic crisis is the result of sabotage by businesses and an opposition funded by the West. – Reuters
← Man collapses, dies in Zupco bus
Casac calls for prosecution of officials linked to COVID-19 relief funds looting →
MDC MPs Walk Out On ‘Incompetent’ Spy Minister
5 thoughts on “Zimbabwe businesses closed, streets deserted on day of protests”